Ikuku Korea: A gaghịzi ahụekere
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Ikuku Korea: A gaghịzi ahụekere
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • culinary • News • Akụkọ North Korea na -agbasa • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Korean Air emeela mkpebi iji wepu ahụekere na onyinye nri ya mgbe ihe na-adịbeghị anya metụtara 2 ndị na-eto eto ewepụrụ n'ụgbọ elu ha site n'ụgbọ elu KE621 gaa Manila si n'ọdụ ụgbọ elu Incheon n'ihi ahụekere ahụekere.
Korean Ikuku emeela ihe a iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị njem na-ahụ ahụekere. Dị ka ihe mbụ, ụgbọ elu ahụ ejirila nri nri ndị ọzọ dochie anya mmanụ ahụekere a honeyara n'ọkụ.
Na mgbakwunye, n'ime izu ole na ole sochirinụ, Korean Air ga-ewepụ nri nwere nri ahụekere na nri ụgbọ elu.
Gbọ elu ahụ kpebisiri ike inye ndị njem niile ebe dị nchebe ma gbochie ụdị ikpe ọ bụla n'ọdịnihu.
"Mkpebi ịkwụsị ngwaahịa ahụekere na ahụekere bụ ihe nchekwa nchekwa opekempe maka ndị njem ahụekere na-arịa ọrịa ahụekere," ka onye na-ekwuchitere Korea Air kwuru.
Ahụhụ ahụekere na-apụta dịka okwu dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ụgbọelu, ọtụtụ ndị na-ebu ụgbọ elu ụwa akwụsịkwala ịnye ngwaahịa ahụekere na-efe efe.
More ozi na njem Atụmatụ dị na Korean Air si homepage maka njem na aekere ahu anataghi.
ndị na-ebu oké egwu mkpebi Emery gburugburu ebe obibi nri ahụ ike in ụgbọ elu Incheon ihe merenụ inlight metụtara Korean Korean Ikuku isi Manila nri tụọ àjà mme uwa ahuekere ngwaahịa -adịbeghị anya wepụ mma Safety snacks Kwụsị kwụsịrị Atụmatụ njem njem izu